बजारमा न्याय (व्यङ्ग्य) - Aajavoli
२९ चैत्र २०७३, मंगलवार २९ चैत्र २०७३, मंगलवार
अचानक बजारमा चहलपहल बढ्यो । डलरको भाउ घटेर वा पाइलटाको अवैध डलरसहित पक्राउ पर्दा जुन बजारमा चहलपहल बढछ , म त्यो बजारको कुरा गरिरहेको छैन । म त्यो बजारको कुरा गर्दैछु । कुरा गर्दा गर्दै म पुन: रोकिन्छु । के कारण म रोकिन्छु भने त्यो बजारमा तिनको कब्जा छ अहिले जो पहिले संसद्का लागि भन्ने गर्थे ‘ के जातिको टाउको देखाएर के जाति विक्री गर्ने ( म यो उखान यस कारण पूरा उल्लेख गरिरहेको छैन – कुनै गैससले यसमा मानवअधिकारमैत्री भएन भनेर कतै व्यक्तव्य ननिकालोस् । अनि त्यही व्यक्तव्यको आडमा म र यो लेख प्रकाशन गर्ने सम्पादका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौजको प्रतिस्पर्धा नहोस् ) । जे होस् । म बजारको कुरा गर्दै थिएँ । बजार अर्थात् राजनीतिक बजारको ।
फोनको वार्तालाप सकिनासाथ उनले मुस्कुराउँदै भने “ थाहा पाउनु भयो ?”
म झस्किएँ , नाकाबन्दी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन पनि उनले यसै गरी सोधेका थिए । त्यतिबेला सारा आमनेपालीले कष्ट भोगेको कुरा समझिएर मन अमिलो भयो । स्थानीय चुनाव नहुने गर्न नहुने कुरा चलिरहेको छ , कतै फेरि नाकाबन्दी त हुने होइन । म डराएँ “ के फेरि नकाबन्दी त हुने होइन ? ’
“ होइन, उनले मुस्कुराउँदै भने “ अब केही बेरमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै छ । ”
“कुन ठूलो कुरा हो ? मैले जबाफ फर्काएँ “ यो नियमित कुरा हो । ”
“पच्चीस दिनपछि बस्न लागेको बैठक पक्कै केही न केही त हुन्छ । अर्काेले थप्यो “ यो आइजिपी प्रकरण अघिल्तिर नभएको भए पक्कै केही दिन अझै बैठक बस्ने थिएन । यसकै लागि पनि बैठक बस्न जरुरी थियो । ”
म सोच्न थालेँ –अचानक अर्कोको योग्यता बढी भएको समाचार नआउन्जेल वा अदालतमा पुन: यो प्रकरण पुगेन भने तीनमध्ये सबैभन्दा योग्यले नियुक्ति पाउनु न्याय हो भने त्यो न्याय पहिले किन भएन ? अहिले न्याय भएको हो ?
ललितपुरमा कांग्रेस प्रवेशमा लहर आयोः दर्जनौले गरे प्रवेश
सिलवाल फेरी न्यायका लागि सर्वोच्चः मूल्यांकनमा सिलवाल २६३ र प्रकाश अर्याल २६२ अंक